Hindiya – Marka Tacliintu noqoto Mahuraanka Nolosha. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Hindiya – Marka Tacliintu noqoto Mahuraanka Nolosha.
Posted by: radio himilo April 13, 2017
Muqdisho – 40-jirka lagu magacaabo Rajesh Kumar Sharma, oo ka yimid caasimadda New Delhi ayaa iskuul ka hoos furay buundo – halkaas oo uu wax ku baro carruurta ka yimaada isku raranta xaafadaha dadka dan-yarta ah kuwaas oo aan xaadiri karin dugsiyada tacliinta. Wuxuu rumeysan yahay in wax-barashadu ay tahay hubka ugu muhiimsan ee dhalinyarada Hindiya – oo haddii aysan helin ay ka dhacayaan nolosha.
Mr. Sharma ma ahan bare run ah. Wuxuu baqaar ku leeyahay magaalada. Wuxuuna laba saac oo kamid ah shaqadiisa uga soo tagaa walaalkiis si uu carruurta wax ugu dhigo buundada hoosteeda oo kamid ah buundooyinka aadka loo adeegsado ee caasimadda Delhi.
Makugu soo dhaceyso inaad halkani ay tahay goob wax lagu wax-barto. Malahan kuraas iyo wixii lamid ah mana heystaan sabuurad. Waxa kaliya ee ay adeegsadaan ayaa ah darbiga buundada oo wax loogu dhigo iyo hooskeeda oo ay fadhiistaan.
Kaliyana si samafal ah wax uguma dhigo carruurtan ee sidoo kale wuxuu ka kaalmeeyaa helidda dhamaan agabyada wax lagu barto sida buug, qalin iyo wixii lamid ah. Carruurta uu baraha u yahayna waxay u dhaxeeyaan da’da 4-jir ilaa 12-jir.
Wuxuuna baraa wax-aqriska, qoraalka iyo xisaabta – isaga oo si lamid ahna ugu diyaariya tacliinta dugsiyada dowladda. Dhab ahaantii, in ka badan 70 kamid ah 140-kii uu ku bilaabay sanadkii 2012 ayaa mar hore fariistay fasallada dugsiyada dadweynaha.
“Wali maalin kasta ayay yimaadaan halkan. Waxaana maareeyaa inaan ku ilaaliyo heerka manhajka wax-barasho ee dalka,” ayuu Sharma u sheegay India Express.
Rajesh Kumar Sharma, oo caasimadda New Delhi yimid 24-sano kahor, wuxuu la kulmay waaya’aragnimo nololeed oo la xiriirta wax-barashada mana la doonayo in qof isaga oo kale uu dhadhamiyo. Marka isaga oo maraya buundadan uu arkay da’yar mudnaa in – halkii wax-barasho loo sameyn lahaa – ay ku luminayaan waqtigooda ciyaar iyo maaweelo, wuxuu go’aansaday inuu wax ka qabto. Wuxuu ku bilaabay inuu waalidiinta carruurtan kala doodo in – baddalkii ay ilmahooda ku shaqeyn lahaayeen – ay mudan tahay inay wax baraan. Waayo wax-barashada ayaa ka qaalisan shaqada maanta.
“Macalinkeenna wuxuu noo sheegay in marka uu faqri yimaado, waddada kaliya ee looga baxsan karo ay tahay wax-barashada,” ayuu yiri mid kamid ah ardaydiisa. Rajesh malahan diiwaanka yeerinta joogitaanka ardayda. Taasina waxay yeelatay in ardaygu ku yimaado xurriyadiisa.
“Waxaan fahmi karaa in dowladdu aysan halkan ka dhisi karin dugsi wax-barasho,” ayuu yiri Sharma. “Laga yaabee inay meel kale oo ardaydan wax ku baran karaan u sameyso. Waana riyadayda.”
Balse inta maalintaas dhalaneyso, booskaas waxaa qeyb ahaan buuxinaya Rajesh.
Next: Conte: “United-ku way ku dhameysan karaan horyaalka booska afaraad.”